Izesekeli zezingubo → Izingubo ezisebenzayo • Izingubo zokufekethisa zobuchwepheshe
Izesekeli zezingubo ukukhethwa kwemikhiqizo esebenzayo ezimbonini ezahlukahlukene. izesekeliEsinikela esitolo sethu yimikhiqizo evela kubakhiqizi esibambisana nabo ekulethweni kwezingubo nezindwangu.
Ungaqiniseka ukuthi zisezingeni eliphakeme. Sisebenza nemikhiqizo ethembekile engathokozi ngombono omuhle kuphela, kepha futhi nokunakekela ukwandisa ibanga. Kulesi sigaba ungathenga, phakathi kwabanye izibopho, izifihla-buso noma izivikelo zobuso ezivikelayo.
Ukunikezwa esikuphakamisayo kunikezelwe kuzo zombili izinkampani namakhasimende azimele. Ngiyabonga njalo ukusebenzisana nama-oda amakhulu, singakunikeza amanani akhangayo aqala entweni eyodwa. Kukhona ithuba lesaphulelo esingeziwe kuma-oda amakhulu.
Izesekeli zezingubo ziyinto engenakuhlukaniswa yokugqoka kuwo wonke umuntu onakekela isithombe esiphelele futhi esingaguquguquki. Uthayi wemfashini ulingana kahle nehembe, futhi uma ihembe linothiswe ngophawu olulodwa noma imidwebo eqondile yenkampani, lwandisa udumo lwenkampani futhi lukhuthaze ukuthembela okukhulu kumqashwa.
Thayi yenziwe ngendwangu ehlala isikhathi eside enesilimbo esinyene, emelana nomonakalo isikhathi eside, konke ukuyenza ibukeke intsha njengokusha ngangokunokwenzeka. Uthayi uthengwa ngokulangazelela ukugcwalisa izembatho zabasebenzi basehhotela edeskini lokwamukela izivakashi nakumaweta nabavuseleli.
Izimaski zokuvikela umlomo nekhala, eza ngokuhlukahluka okuhlukahlukene, zisathandwa namanje. Ubuningi bemibala ngokuqinisekile buzokuvumela ukuthi ukhethe okuthile kubantu abadala nezingane. Amaski athungwa egumbini lethu lokuthunga, sibonga ukuthi siqinisekile ngezinto ezisetshenzisiwe kanye nekhwalithi yomsebenzi.
Zenziwe ngezindwangu eziphephile ezenziwe ngezinto eziqinisekisiwe, ezingenazo izinhlanganisela ezinobuthi. Sidayisa izifihla buso ezingasetshenziswa futhi namasiki alahlwayo. Siphinde sibe namaski anephakethe lokuhlunga okungashintshwa.
Ukotini imaski graphite
Kulabo abanakekela ukunethezeka okukhulu nenkululeko yokusebenzisa ngehawu lobuso ngasikhathi sinye, sidale izinhlobo ezimbili zezigqoko zokuzivikela. Sine izigqoko zobuso ezigcwele yenziwe nge-visor ukotini nesifihla futhi izigqoko ezincane imboza ubusuku nezindebe, ikakhulukazi zikhululekile kubantu abafake izibuko. Imikhiqizo yethu ihlangabezana nezinkambiso namazinga asebenzayo.
Isigqoko sempumulo nomlomo omncane
Isigqoko sobuso esigcwele
izesekeli zezinguboizesekeli zokugqoka zabesilisa